Abenzi be-Fiber Optical Node | I-China Fibre Optical Node Factory
I-ZBR804 Izindlela Ezine Isamukeli Sokukhanya Kwangaphandle
Incazelo Yomkhiqizo we-1.0 ZBR804 Izindlela Ezine Isamukeli Esingaphandle Esibonakalayo sihlanganisa phambili ukwamukela isignali ebonakalayo, okusabalalisayo nokubuyisela emuva isidluliseli, okuyinto eyongayo, ukusebenza okuphezulu nedivayisi yenzuzo ephezulu. Isetshenziswa kakhulu ekugcineni kwe-optical fiber network, lapho idinga khona izindlela eziningi zokusabalalisa izinga eliphakeme le-RF ukuze libhalise ngqo, futhi icele umsebenzi ohlangothini olu-bi. Ngale ndlela inganciphisa i-amplifier futhi yenze inethiwekhi ithembeke ngokwengeziwe. Ithebula lisebenzisa okusha okungangenwa manzi ngalo ...
Isamukeli sesine se-port esinendlela yokubuya (ZBR8604-B)
Ipharamitha yokukhanya Indlela eya phambili Buyisela indlela yokuthola ubude besilinganiso se-Optical (nm) 1100 ～ 1600 I-Optical received wavelength (nm) 1100 ～ 1600 Optical input range (dBm) -7 ～ + 2 Optical output range (mW) 1, 5 Connector type FC / APC, SC / APC Isixhumi sohlobo FC / APC, SC / APC Optical reflection loss (dB) ≥45 Optical reflection reflection (dB) ≥45 Xhumanisa ipharamitha Phambili indlela yokubuya Indlela CNR (dB) CSO (dBc) CTB (dBc) ＞ 51 ≤- 60 ≤-65 CNR (dB) CSO (dBc) ...
I-ZBR864B Optical Node (Okukhipha Okuzimele)
Izici ◆ 1310nm no-1550nm indlela esebenza kabili ◆ Izindlu ze-aluminium eziphakathi nendawo, ukusebenza okuphelele okungangeni manzi nokushisa ukushisa.Yamukela ubuchwepheshe obuphambili bokupholisha kanye ne-passivation technics, ukwenza ubuso bubumbe ijazi lokuvikela eliminyene, linokusebenza okuhle ekusakazeni ukushisa, ugesi ukuqhutshwa kwezinto kanye nokuvimbela uketshezi (imvamisa izindlu zasekhaya zisebenzisa upende wokufafaza noma upulasitiki wokufafaza, ukushisa kokushisa kuphansi ngo-15%). Output 4-indlela ephezulu yokukhipha ngokuzimela, ingafinyelela ku-110dBμV, ajusta ...
I-ZBR1004R Isamukeli se-Optical Optical
Isingeniso i-ZBR1004R iyi-receiver ejwayelekile yasendlini engu-19-intshi 1U, eyenziwe kahle, evelele kunkomba, isamukeli sangaphakathi singanikezwa ngamamojula okudlulisa indlela. Ephakeme ekwamukeleni ukuzwela, umsindo ophansi, izindlela ezine zokubuyisa amamojula wokuthola okusebenzayo afanayo aqinisekisa ukudluliswa kwekhwalithi ephezulu kwezimpawu zokuhambisa ezine zokubuyisa. Ibanga leleveli yokuphuma engu-20dB. Ukunikezwa kwamandla yi-AC220V. Izici 1.Two windows ukusebenza 1310nm ...